၎နှဈအတှငျး စပိနျအတှကျ ပထမဆုံးဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ကာဇိုလာကို ထူးခွားသူတဈဦးအဖွဈ စပိနျနညျးပွခြီးကြူး
November 16, 2019 phyo Global News, News 0
စပိနျအသငျးနညျးပွ ရောဘတျမိုရီနိုက လကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ ၄နှဈအတှငျး ပထမဆုံးဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တဲ့ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ ဆနျတီကာဇိုလာကို ထူးခွားသူတဈဦးအဖွဈ သတျမှတျရငျး အသိအမှတျပွုခြီးကြူးလိုကျပါတယျ။
ဗီလာရီးရဲလျကှငျးလယျဖနျတီးရှငျ ကာဇိုလာဟာ အာဆငျနယျအသငျးမှာ ကစားခဲ့စဉျက ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူရလုနီးပါးဖွဈခဲ့တဲ့ကာလရှညျဒဏျရာပွဿနာကနေ ပွနျလညျနိုးထနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ စပိနျအသငျးမှာ ပွနျလညျရှေးခယျြခံခဲ့ရပွီး ယမနျနညေ့က မျောလျတာကို ၇-၀ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ယူရို ၂၀၂၀ ခွစေဈပှဲမှာလညျး ဂိုးပါသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီပှဲမှာ ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ ကာဇိုလာ ဂိုးပေါကျတှခေဲ့သလို လူငယျကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ပါအူတောရကျဈနဲ့ အိုလျမိုတုိ့လညျး လကျရှေးစငျကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးဂိုးတှအေသီးသီးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး နာဗကျဈ၊ ရာအူးလျအယျလျဘီယိုနဲ့ ရာမို့ဈတို့လညျး ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့ပါတယျ။
စပိနျအသငျးနညျးပွဘ၀ ရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျတငျထားတဲ့ မိုရီနိုက ”ဆိုးရှားလှနျးတဲ့ဒဏျရာပွဿနာတှကေနေ စိတျဓာတျမကဘြဲ ပွနျလာနိုငျပွီး ဒီလိုခွစှေမျးမြိုး၊ ဒီလိုအောငျမွငျမှုမြိုး ယူပွနတောက သူဟာ တမူထူးခွားသူဆိုတာ သကျသပွေနတောပါပဲ။ ကာဇိုလာ၊ ရာအူးလျနဲ့ ရာမို့ဈတို့လို ကစားသမားတှမေပါဝငျဘဲ ပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ဆီမီးဖိုငျနယျ၊ ဖိုငျနယျတှမှော အနိုငျရဖို့ ခကျပါတယျ”
”သူတို့လို ဆုဖလားတှအေမြားကွီးရထားတဲ့ကစားသမားတှရေဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုက ခနျ့မှနျးလို့မရလောကျအောငျ ကွီးမားလှနျးပါတယျ။ သူတို့ရဲ့အတှအေ့ကွုံတှမေပါဝငျဘဲနဲ့တော့ ပွိုငျပှဲကွီးတှမှောအနိုငျရဖို့ ခကျပါတယျ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
စပိနျအသငျးဟာ ပထမပိုငျးမှာ မိုရာတာနဲ့ ကာဇိုလာတုိ့ရဲ့ဂိုးတှကွေောငျ့ ၂-၀ ဂိုးနဲ့သာ ဦးဆောငျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ပါအူတောရကျဈ၊ ဆာရာဘီးယား၊ အိုလျမို၊ ဂရြတျမိုရီနိုနဲ့ နာဗကျဈတို့က ဂိုးတှဆေကျတိုကျသှငျးယူနိုငျခဲ့လုိ့ ၇ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့တာပါ။
ကာဇိုလာဟာ ၂၀၁၃ နိုဝငျဘာလ ၁၃ရကျနကေ့ အင်ျဂလနျအသငျးကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ ၄နှဈ(၁၄၆၃ရကျ)အကွာမှာ မျောလျတာဘကျကို ပထမဆုံးလကျရှေးစငျသှငျးဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Gol de Santi Cazorla con la Selección4años después. Sufrió 8 operaciones de tobillo, estuvoapunto de que le ampuntaran el pie y el médico le dijo que estuviera contento si lograba caminar con su hija en el césped de casa. pic.twitter.com/ksIRBfaJvs
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 15, 2019
၄နှစ်အတွင်း စပိန်အတွက် ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ကာဇိုလာကို ထူးခြားသူတစ်ဦးအဖြစ် စပိန်နည်းပြချီးကျူး
စပိန်အသင်းနည်းပြ ရောဘတ်မိုရီနိုက လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ၄နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ ဆန်တီကာဇိုလာကို ထူးခြားသူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ရင်း အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
ဗီလာရီးရဲလ်ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ကာဇိုလာဟာ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ကစားခဲ့စဉ်က ကစားသမားဘ၀ကနေ အနားယူရလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလရှည်ဒဏ်ရာပြဿနာကနေ ပြန်လည်နိုးထနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် စပိန်အသင်းမှာ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ယမန်နေ့ညက မော်လ်တာကို ၇-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲမှာလည်း ဂိုးပါသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီပွဲမှာ ၀ါရင့်ကွင်းလယ်လူ ကာဇိုလာ ဂိုးပေါက်တွေ့ခဲ့သလို လူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ပါအူတောရက်စ်နဲ့ အိုလ်မိုတုိ့လည်း လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးဂိုးတွေအသီးသီးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး နာဗက်စ်၊ ရာအူးလ်အယ်လ်ဘီယိုနဲ့ ရာမို့စ်တို့လည်း ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စပိန်အသင်းနည်းပြဘ၀ ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတဲ့ မိုရီနိုက ”ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကနေ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ပြန်လာနိုင်ပြီး ဒီလိုခြေစွမ်းမျိုး၊ ဒီလိုအောင်မြင်မှုမျိုး ယူပြနေတာက သူဟာ တမူထူးခြားသူဆိုတာ သက်သေပြနေတာပါပဲ။ ကာဇိုလာ၊ ရာအူးလ်နဲ့ ရာမို့စ်တို့လို ကစားသမားတွေမပါဝင်ဘဲ ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဆီမီးဖိုင်နယ်၊ ဖိုင်နယ်တွေမှာ အနိုင်ရဖို့ ခက်ပါတယ်”
”သူတို့လို ဆုဖလားတွေအများကြီးရထားတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုက ခန့်မှန်းလို့မရလောက်အောင် ကြီးမားလွန်းပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမပါဝင်ဘဲနဲ့တော့ ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာအနိုင်ရဖို့ ခက်ပါတယ်”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စပိန်အသင်းဟာ ပထမပိုင်းမှာ မိုရာတာနဲ့ ကာဇိုလာတုိ့ရဲ့ဂိုးတွေကြောင့် ၂-၀ ဂိုးနဲ့သာ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ပါအူတောရက်စ်၊ ဆာရာဘီးယား၊ အိုလ်မို၊ ဂျရတ်မိုရီနိုနဲ့ နာဗက်စ်တို့က ဂိုးတွေဆက်တိုက်သွင်းယူနိုင်ခဲ့လုိ့ ၇ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာပါ။
ကာဇိုလာဟာ ၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့က အင်္ဂလန်အသင်းကို ၂-၀ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၄နှစ်(၁၄၆၃ရက်)အကြာမှာ မော်လ်တာဘက်ကို ပထမဆုံးလက်ရွေးစင်သွင်းဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝီလြံအတှကျ GOAT က မကျဆီလညျးမဟုတျ၊ ရျောနယျဒိုလညျးမဟုတျ ရျောနယျဒငျဟိုသာတညျး…